पूरा पढ्नुहोस सलाम छ यी डाक्टरलाई : जो वैशाखी टेकेर अस्पतालमा खटिएका छन् – List Khabar
Home / समाचार / पूरा पढ्नुहोस सलाम छ यी डाक्टरलाई : जो वैशाखी टेकेर अस्पतालमा खटिएका छन्
पूरा पढ्नुहोस सलाम छ यी डाक्टरलाई : जो वैशाखी टेकेर अस्पतालमा खटिएका छन्
admin2weeks ago समाचार Leaveacomment 38 Views
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीका अहेव ठगुराम भण्डारी वैशाखीबिना उभिन सक्दैनन्।गत चैत २२ मा उनी सवार मोटरसाइकललाई बाटो खनिरहेको डोजरले ठक्कर दियो। त्यतिबेला उनी सर्वसाधारणलाई कोरोनाविरूद्धको खोप लगाइदिएर फर्किँदै थिए।
गत चैत २२ मा उनी सवार मोटरसाइकललाई बाटो खनिरहेको डोजरले ठक्कर दियो। त्यतिबेला उनी सर्वसाधारणलाई कोरोनाविरूद्धको खोप लगाइदिएर फर्किँदै थिए। घोराही उपमहानगरपालिका-२ रामपुर चोकमा बाटो खनिरहेको डोजरले ब्याक गर्ने क्रममा उनको मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो। डोजरको ठक्करले उनी लडे र दायाँ खुट्टाको फिबुला भाँच्चियो। अस्पताल पुगेर खुट्टामा प्लाष्टर गरे।
अहिलेको अवस्थामा कतिपय कर्मचारीलाई संक्रमण भएको हुँदा कर्मचारी अभाव रहेको र सीमित कर्मचारी मिलेर सिफ्ट सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए। ‘हामी दैनिक १० देखि १२ घन्टा ड्युटी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पाँच दिन दिउँसो र बाँकी रातिको समय मिलाएर ड्युटी गरिरहेका छौं।’ परिवारले पनि सकभर आफूले केही कष्ट उठाएर भए पनि महामारीको समयमा अरूको ज्यान जोगाउनु पर्छ भनेर हौसला थप्ने गरेको ४२ वर्षीय भण्डारीले बताए।
Previous साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरुका लागि आयो अत्यान्तै खुशीको खबर
Next एक जनाको आँखाको नानीले चार जनालाई दृष्टि दिन सकिने प्रविधि बनाए डा. रुइतले !(भिडियो सहित)